I-iPhone iPhone 4 Battery Replacement 3.7V 1420mAh Li-ion Ibhetri ene-0 umjikelezo
Incazelo:IPhone 4 Ibhethri,Ukushintshwa kwebhethri ye-iPhone 4,gxuma iphesenti ibhetri,I-Battery ye-iPhone ene-0 Cycle,,
Home > Imikhiqizo > I-iPhone Battery > iPhone 4 Battery
Ukufaka esikhundleni se-Apple iPhone 4 Battery Replacement
Ingabe ibhethri yakho ye-iPhone 4 idla ngokushesha? Ingabe amaphesenti akho we-Apple iPhone 4 Battery agxuma?
I-iPhone 4 Li-ion Ukushintshwa Kwebhethri ngomjikelezo we-0  Xhumana Nanje
I-iPhone iPhone 4 Battery Replacement 3.7V 1420mAh Li-ion Ibhetri ene-0 umjikelezo Ifektri yethu iyinhlangano yokukhiqiza ibhethri ye-iPhone, efanayo nekhono langempela futhi emva kokuhamba komjikelezo wama-500 namanje igcina u-80% amandla. Uma...
I-China iPhone 4 Battery Abahlinzeki
Le battery entsha ye-iPhone 4 ye-iPhone ukuze ithathe isikhundla sakho esingalungile, esingenaphutha, ephukile, esibhebhethekile, evulekayo, eqhumayo ibhethri yebhethri, ifanelana kuphela ne-iPhone 4 hhayi eminye imodeli. I-iPhone 4 Ibhethri yokuguqula indawo yokuphila iskhathi sokuphila cishe izikhathi ezingu-500, emva kwezikhathi ezingu-300 namanje zingagcina u-80% amandla. Singabantu ukuhlinzeka kwangaphambili kwe-iPhone Battery nge-0 Cycle. Sinikeza izinyanga ezingu-12 iwaranti, yonke ibhethri idlulile i-CE, i-RoHS, i-MSDS ne-UN38.3 isitifiketi.
I-iPhone 4 Battery Pack
Amandla: 1420mAh (5.2whr)
IPhone 4 Ibhethri Ukushintshwa kwebhethri ye-iPhone 4 gxuma iphesenti ibhetri I-Battery ye-iPhone ene-0 Cycle IPhone 4S Ibhethri